Akụkọ - KWESTAR Develop mepụtara Mpempe Mpempe Ntugharị Na-adọkpụ maka usoro ọkpọkọ dị elu na nke dị elu nke 600 na 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit steam steam
KWESTARed mepụtara Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe Elu na nke ọkara nke 600 na 1,000MW nke na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri na-ebugharị
N'ọnwa Ọgọstụ nke afọ 2018, CONVISTA mepụtara oghere Valve Parallel nke ọma maka usoro ọkpọkọ ọkpọkọ dị elu na nke ọkara nke 600 to 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit steam turbine. Uru nke ihe dị ka ndị a:
1.It adopts mgbali onwe-akara Ọdịdị, na welded njikọ na nsọtụ abụọ.
2.It adopts electric uzo valvụ na uzo mmiri na tinyekwa maka guzozie esi mgbali na uzo mmiri na tinyekwa.
3. Ya mmechi usoro adopts yiri sọrọ-flashboard Ọdịdị. Akara valvụ sitere na nrụgide na-ajụ kama ịmalite ijikwa arụ ọrụ iji gbochie valvụ ahụ ka ọ ghara inwe nsogbu dị egwu n'oge mmeghe ya na mmechi ya.
4. Na cobalt dabeere isiike alloy Mee-elu ịgbado ọkụ, akara akara atụmatụ elu okpomọkụ na-eguzogide, corrosion eguzogide, abrasion eguzogide, ogologo ọrụ ndụ na ndị ọzọ e ji mara。
5. N'ịnọgide mgbochi corrosion na nitrogenization ọgwụgwọ, na valvụ azuokokoosisi elu atụmatụ ọma corrosion eguzogide, abrasion eguzogide na a pụrụ ịdabere na nri igbe akara.
6. Ọ nwere ike dakọtara na iche iche na ụlọ na dị ka electric ngwaọrụ izute DCS akara chọrọ na-aghọta ime na obodo arụmọrụ.
7. Ọ ga-emeghe n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ mechie n'oge ọrụ. Agaghị eji ya dị ka valvụ na-achịkwa ya.